CEntrance Ships Recorder amin'ny sehatry ny sehatra matihanina miaraka amin'ny Stereo Mics - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Fampandrenesana CEntrance ireo mpandray anjara matihanina amin'ny sehatra Stereo Mics
Fampandrenesana CEntrance ireo mpandray anjara matihanina amin'ny sehatra Stereo Mics
Ny MixerFace R4B no vahaolana fandraisam-peo avo lenta ho an'ny Broadcasting finday
Chicago, IL - Novambra 5, 2019 - CEntrance nanambara fa ny vahaolana matihanin'izy ireo, ny MixerFace R4B, dia fandefasana ankehitriny. Ny fifandraisana an-tariby fampandrenesana finday voatonona dia miaraka amina microy stereo XY, PivotMics PM1, ary mpikirakira karatra 24-bit SD vitaina, mamorona fitaovana miorim-paka sy avo lenta. Ny mixerFace R4B vaovao dia mitazona ny endri-javatra rehetra an'ny modely MixerFace ray aman-dreny, ao anatin'izany ny bateria azo refesi-mandrafitra, trano fanorenana miorina tsara, feo mandeha tsara amin'ny sivana pristine, ary ny mpampiasa interface tsara, izay miara-miforona ny mamorona vahaolana finday tonga lafatra ho an'ny fampielezana lavitra na fanangonana vaovao. , podcasting, ary dinidinika.
Ankoatra ny vahaolana lehibe indrindra ho an'ny fampiharana Broadcast & Radio, ny MixerFace R4B dia tonga lafatra ihany koa amin'ny firaketana an-tsaha, ny fampisehoana fampandrenesana, ny famerenan'ny tarika, ny fampitana mivantana mivantana, ny fakana feo avy amin'ny toerana fifangaroan'ny FOH amin'ny fampisehoana an-tsary, ary maro hafa.
MixerFace dia fitaovana audio ilaina, mora ampiasaina, izay antsoina matetika hoe "The Swiss Army Knife of Audio". Ny bateria anatiny ary maharitra ela indrindra dia mampiavaka azy amin'ny fantsom-peo portable hafa ary mahatonga azy ho namana tsara indrindra amin'ilay lalana. Rindrambaona mic manana kalitao roa manana kalitao 48V tena misy no avelao ny mpampiasa hisafidy ny mikrofon'izy ireo tianao indrindra amin'ny firaketana, na azo ampiasaina miaraka amin'ny CEntrance PivotMics PM1. The Neutrik Ny jacks input an'ny Combo miaraka amin'ny endri-panadraharaha Hi-Z dia mamela ny fidirana amin'ny gitara sy basses elektrika, izay midika ihany koa fa afaka mampiakatra fitaovana mozika mozika, hevitra pad, na mixer an'ny onjam-baventy ny MixerFace R4. MixerFace R4B afaka mamadika finday ho lasa fitaovana streaming streaming na DAW portable, mety tsara amin'ny fahazoana feo maneno feo matihanina na aiza na aiza.
Tsy manam-paharoa amin'ny fampielezam-peo sy onjam-peo, ny MixerFace R4B misy ny pasipaoro dia manamora ny firaketana feo avo lenta amin'ny matihanina na aiza na aiza. Ny mikrô dia manome valiny mivezivezy matetika, fahaizana SPL avo ary malefaka ambany, ka mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ny firaketana teny na firaketana mozika. Ny kofehy condenser vita amin'ny precision eo amin'ny ankavia sy havanana havanana dia samy napetraka amin'ny zoro 45-degree, mamorona kiraro stereo 90-degree XY. Raha azo atao, azo ampidirina amin'ny fantsom-pifandraisana mifanohitra ny mikrofona, manatrika ny fivoahana ivelany ary manova ny MixerFace ho fitaovana famahanana fizahana mifampiresaka, mety ho an'ny mpitati-baovao sy podcaster izay manadihady ny vahin'izy ireo mandeha.
Ny 24-bit / 48kHz stereo SD card recorder dia manolotra ny "One-Button Record" ary maka sary an-tsehatra avy hatrany, tsy miandry fotoana hifandraisana amin'ny finday na tablet. Manamboatra kopia fiarovana amin'ny fifangaroana izany ary mamela ny streaming streaming amin'ny alàlan'ny telefaona raha mirakitra kopia eo an-toerana amin'ny karatra SD, haingam-pandanjalanjana tsy hitovizan'ireo rakitsoratra misy.
Ny fitaovana azo trandrahana azo ampiasaina dia mety hanintona ireo mpitoraka bilaogy sy mpaka sary amin'ny DSLR. Miara-miasa amin'ny smartphone na fakantsary vidéo, mampitombo ny kalitao ny vokatra noho ny onjam-peo fakantsary mahazatra, manatsara ny lanjan'ny famokarana sarimihetsika semi-matihanina.
Ny MixerFace R4B dia azo alaina ankehitriny amin'ny $ 499.99 USD (tinyurl.com/MixerFaceR4B). Ny CEntrance PivotMics vaovao dia mandefa ihany koa amin'ny $ 179.99 ho an'ny mpivady.
"Namolavola mpitati-baovao matihanina hatrany am-boalohany izahay, ny fomba tianay hampiasa izany," hoy izy Michael Goodman, CEO CEO. “Nianatra betsaka izahay ary tena mirehareha amin'ity vokatra ity. Tsy ho diso fanantenana ny mpanjifanay. ”
Nandritra ny efa ho roapolo taona izay, ny marika marika manaitra indrindra eran'izao tontolo izao ao amin'ny Pro Audio sy Consumer Electronics dia nitodika tany CEntrance ho an'ny teknolojia digital nomerika. Ny fahazoan-dàlana an-tsehatra no ahazoana fahefana manome valandresaka gitara, fandraketana an-tsoratra, mpandahateny mahay ary DAC avy amin'ny lisitra AZ misy marika ambony, toa an'i Alesis, Harman, McIntosh, ary Zoom. Ankehitriny, noho ny fitiavany ny feo miorim-paka amin'ny audio pro, ny CEntrance dia mahafaly ny mpanjifa eran'izao tontolo izao miaraka amina andian-tsarimihetsika sy famokarana haino aman-jery ho an'ny rakitsary sy famerenam-peo. Mpanakanto malaza, mpamokatra, matihanina amin'ny feon'ny feo ary mpamorona feo manohana ny vahaolana amin'ny CEntrance. Tsidiho izahay www.centrance.com
MixerFace ™, Interface Recording Mobile, Jasmine Mic Pre ™, BlueDAC ™ dia marika famantarana ny CEntrance. Ny Trademark rehetra dia fananan'ny tompony avy. Zo rehetra voatokana.
Lahatsoratra farany an'i Paul de Benedictis (jereo rehetra)
Fampandrenesana CEntrance ireo mpandray anjara matihanina amin'ny sehatra Stereo Mics - Novambra 5, 2019
Ny CEntrance dia manomboka ny MixerFace Podcast - May 1, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Spears & Arrows Video injeniera	2019-11-05
Previous: Fahaiza-miaina amin'ny sary studio
Next: Alaivo sary an-tsaina ny vaovao farany momba ny teknolojia trak ho an'ny NEP Belzika
MAVITRA Broadcast sy IT Support Engineer